Shirkaddaada ama shakhsiyadda ma qoreysa in badan oo ku saabsan image ah in ay Relays dhex Instagram? Waxan qiyaasayaa in ay qabato oo aad u badan tahay in laga yaabo in ay ka fekereyso hagaajinta hortiinna ee warbaahinta bulshada taasi si weyn loo jecel yahay qaybsiga sawir madal dhex. Halkan waxaan ku eegno 10 ka mid ah ugu wanaagsan ee Chine sawir oo lacag la'aan ah in dhab ahaan u soo jiidi doonaa inaad fiiro! Miyaanan xusin in dhammaan kuwa aan isku dayi doonaa waa lacag la'aan?
Tani waa mid ka app farshaxanka weyn laga heli karaa macruufka iyo app labada dhinacba in ay si dhab ah kaa caawin doona inaad la abuuro hubaal wuxuu kuu samayn doonaa sawiro aad eegto sida weyn sawir. Waxaa intaa dheer, in aad kaliya ka qaadan kartaa sawir ka mid ah kuwii posted by bulshada lidka diyaaradaha iyo la sameeyo sawir iyaga. Waayo-aragnimo bulshada Great hubaal!
Mid ka mid ah ayaa soo socda ee xidhmo waa framestatic. Dadka la iPhone iyo iPad u jeclaan doonaa app this. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u badalaan sanamyadiinna la filtarrada midabka inkastoo xal sare aalladda. Version ugu dambeeyay ayaa taageero shaashad oo hubaal ka badan ayaa la filayaa in qaybaha soo socda. Download app this on dukaanka tufaax lacag la'aan ah.
Tani waa mid ka app kale oo lacag la'aan ah in dhigeysa ugu fiican halkaas. App, ee ay soo Bitcellar harsan oo dhan dhufto-in mobile waa labada macruufka android iyo. Feature Waxa ugu xiisaha badan leh app dilaaga tani waa in ay u saamaxdo caption codkaaga sawiro. Tani waa in la sheego in aad naftaada u qoraan karaan sida aad qaadato sawir aad. Tani waa wax la yaab leh u app oo lacag la'aan ah in lagala soo bixi karaa fxcamera.com, Google ciyaaro ama Apple Store.
La hadal ah barnaamijyadooda la lahayn xayeysiis app ama awoodaha retouching sawir weyn oo aad u malaynayso ah Camera app 360.This kaa caawin doona inaad si deg deg ah xaalkaa photos underexposed ama bartey mugdi ah oo aan inta badan loo buunbuuninayo ah. Dhammaan waxaad yeelan doontaa click on doorasho Enhancement iyo habeen la doortay si ay u gaaraan natiijo la jecel yahay. Waxaa tijaabiyo daalin waqtiyada laakiin waa dookh fiican u yahay adiga Instagram. Waxaad ka heli kartaa app ka Google play, Play Store ama meel kasta ku kalsoon online.
Tani waa app ku jira liiska la interface aad u soo jiidasho garaafyada u isticmaalka. PhotoWonder-ee ay soo Baidu Netcom Company orso oo Chinese toosaa amrayo feature collage in kicin doonaa jacaylka aad sawiro.
6. guridda Deco
Users Iphone kuwaas oo isku dayay app this Hubaal wax shalaay ah wax alla wixii. Tani waa app in ka dhigi doonaa account Instagram aad taagan sidii filtarrada ay lagu sii diyaariyey loogu talagalay, si loo waafajiyo bulshada. Waxa kale oo si xor ah laga heli karo Apple Store ah.
7.Magic Saacadda Lite
Tani waa app weyn sawir in gabi ahaanba waa bilaash ah u isticmaala android inkastoo ay sidoo kale diyaar u ah iPhone. App ayaa helay sida diirada u maldahan soo jireenka ah ay weheliso by hawlaha wareeg ah usii sidaas u suuro-aad in ay soo saaraan saameynta sawir fiican. App waa xor ah laga heli karaa Google play Store.
Camera 8. LINE
No app kale oo lacag la'aan ah ayaa farshaxan ugu fiican badan app this. App waxay ku dhisan tahay in xaalkaa photos isku dhafan ee xuduudaha, stamps iyo astaamo aan ku xuso soo diyaariyeen balaadhan oo ah fursadaha font diyaar u ah in aad ku darto qoraalada ku sawiradaada. Sidoo kale waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Download app this on Google play dukaanka.
Tani waa app ee isticmaala jecel qabsado sawiro ay la saamaynta ugu khiyaano sida ay kuu ogolaanayaa inaad si ay ula qabsadaan sida diirada ay. Iyadoo Tadaa waxaad yeelan doontaa fursad aad ku sixiddiisa sawiro aad marka aad gasho Instagram ama xataa si fiican aan boonooyinka Instagram ama wax goobaha kale ee warbaahinta bulshada. Raac link this www.tadaa.net in download this app yaab. Waxa kale oo aad ka raadin kartaa waxa u ku dukaanka Play ama Apple Store ah. Ka dib oo dhan xor ah oo la yaab leh!
10. Rakuga cute
Tani waa app Japan in dad badan oo u muuqdaan in ay iska indha aan garanaynin awood u leeyahay. Waxaad u malayn kartaa waxaan ka badbaadinayey ahay ilaa aad qaadato peek ah ee qaar ka mid ah awoodiisa tafatirka ay. Rakuga cute kuu ogolaaneysaa in aad pixelate qayb kasta oo sawir aad si madax banaan sixiddiisa. Waxaa laga yaabaa inaad u badan tahay in doonayaan in ay isku dayaan mugdiga galinaya baxay qaybo ka mid ah sawirada aadan rabin arkay iyo wixii kale ee lacag la'aan ah app iPhone inay sidan sameeyaan ka badan Rakuga cute!
50 + qosol Instagram Quotes
Sida loo Edit Instagram Video
Maxaad Apps shil ku macruufka 8 iyo Solutions
> Resource > Apps > 10 Best Free Instagram Photo Apps Waa inaad isku daydaa